Iwindi Screen - China Hebei Samsung Metal Wire Mesh
Iwindi Screen Isingeniso Isikrini iwindi, isikrini isinambuzane noma ngendiza screen wire sensimbi, fiberglass, noma ezinye zokwenziwa fibre anezikhala, welula ohlakeni ngokhuni noma insimbi, eklanyelwe ukumboza kuvulwa iwindi evulekile. Inhloso yayo eyinhloko ukugcina amahlamvu, doti, izinambuzane, izinyoni, nezinye izilwane uma bengena esakhiweni noma isakhiwo bahlolwe ezifana umpheme, ngenkathi kuvunyelwa fresh air-ukugeleza. izindlu kakhulu e-Australia, e-United States nase-Canada babe izikrini ku wonke amawindi operable, whic ...
Fob Inani: US $ 0.35 - 0.55 / Square Imitha
Min.Order Ubuningi: 1 Roll / Rolls
Supply Ikhono: 1000 Roll / Rolls Day ngayinye
Isikrini iwindi, isikrini isinambuzane noma ngendiza screen wire sensimbi, fiberglass, noma ezinye zokwenziwa fibre anezikhala, welula ohlakeni ngokhuni noma insimbi, eklanyelwe ukumboza kuvulwa iwindi evulekile. Inhloso yayo eyinhloko ukugcina amahlamvu, doti, izinambuzane, izinyoni, nezinye izilwane uma bengena esakhiweni noma isakhiwo bahlolwe ezifana umpheme, ngenkathi kuvunyelwa fresh air-ukugeleza. Izindlu kakhulu e-Australia, e-United States nase-Canada babe izikrini ku wonke amawindi operable, okuyinto ziwusizo kakhulu ezindaweni ukuthi babe imiphakathi emikhulu yabantu omiyane. Ngaphambili, izikrini eNyakatho neMelika yayivame ithathelwe indawo amafasitela ahlotshiswe ngokweqile isiphepho ebusika, kodwa manje imisebenzi amabili avame ezihlanganiswe inhlanganisela lwesivunguvungu isikrini amafasitela, okukuvumela ingilazi futhi screen panel kwislaydi up and down.
Types Of iwindi Screening Fabric
Izinto ezivamile asetshenziselwa isinambuzane Ukuhlolwa ezibonakalayo aluminium ne-fiberglass. Aluminium iwindi kwesikrini ngokuvamile etholakala aluminium zemvelo noma i namalahle umbala isicelo; namalahle iyabonakala kakhulu. Fiberglass itholakala grey ukukhanya kanye namalahle imibala, namalahle futhi ukunikela okungcono futhi ukubukeka. Fiberglass kuyinto engabizi, futhi has inzuzo hhayi "denting" lapho hit noma kwaphoqa. Nokho, anezikhala fiberglass Kuthi opaque ezingaphezu kuka-aluminiyamu anezikhala, okuyinto mnyama ukubukeka kwangaphandle ewindini futhi kunciphisa inani ukukhanya ngobulili kusukela ngaphandle. Ngaphezu kwalokho, fiberglass isikrini elilulaza ngokushesha nge ukuchayeka UV ukukhanya, okuholela ke fraying breaking ngemva nje kweminyaka embalwa, ngokungafani aluminium ozobakhona isikhathi eside kunalokho.
Ukuthola izinhlelo zokusebenza etlhoga amandla enkulu, ezifana iminyango bahlolwe, inayiloni kanye polyester Ukuhlolwa ayatholakala.
Bronze isinambuzane Ukuhlolwa kuyabiza kakhulu, kodwa linikeza isevisi isikhathi eside kakhulu kuneminyaka noma aluminium noma-fiberglass. Lapho kuqala kokufaka iwindi kwesikrini, it has umbala igolide; lokhu weathers i namalahle avulekile amnyama ungakapheli nonyaka noma ngaphansi. Bronze Kuthi livikela kakhulu denting kuka aluminium. Ngaphansi izindwangu sesikrini ezivamile zihlanganisa zethusi, ithusi, insimbi engagqwali, nensimbi lashukumisa.
Ngaphezu Ukuhlolwa isinambuzane, izinhlobo luthe ukuqina isikrini ukuthi zinciphisa kwelanga nokushisa inzuzo ayatholakala. Lezi ukunikeza abalulekile ezingaba energy imali uma kushisa.
Sokuzenzela ngokwakho kwesikrini futhi Uhlaka esikhundleni kits ziyatholakala kabanzi at hardware kanye ekhaya ngcono ezitolo. Lezi ozimele ngokuvamile yakhiwa aluminium ngqo izinhlangothi (okungase wasika yobukhulu) and plastic ekhoneni ifaka. Isikrini esikhundleni kits ngokuvamile aqukethe umqulu inayiloni Ukuhlolwa lendwangu supply elinomusa iraba spline.
Previous: Fiberglass Plain Nokwelukiweyo Wire Netting
Olandelayo: Staninless Steel Wire Mesh
8x8 Nokwelukiweyo Wire Screen
i-fiberglass Iwindi Screen
lashukumisa Iron Iwindi Screen
Nylone Iwindi Screen
Engagqwali Isikrini Wire Mesh
Engagqwali Iwindi Screen
PVC Fence Camera
Ukwakhiwa Mesh Panel
Lashukumisa gabion Mesh